Ukuthengwa kwexabiso leShishini le-Optical Tape kuMqulu omkhulu
Inkokeli yoshishino lobunjineli yegumbi elicocekileyo elicocekileyo nelingenathuli iguqule ngempumelelo ibala lefilimu elisebenzayo ukuqala uhambo olutsha lokukhula. Ishishini lemveli lenkampani yi-R & D, imveliso kunye nentengiso yobunjineli belabhoratri ecocekileyo kunye nenkxaso yemveliso...Funda ngokugqithisileyo »
Ukuboniswa ngokupheleleyo kweTekhnoloji yokuPakisha ye-OLED
2017 Shanghai International touch kunye nomboniso umboniso iya kubanjelwa e Shanghai World Expo iholo umboniso ukususela ngoAprili 25 ukuya 27. Lo mboniso izisa kunye amashishini ukusuka touch screen, panel ukubonisa, ukuveliswa mobile phone, izixhobo audio-visual, uyilo scheme electronic, njl OLED , t...Funda ngokugqithisileyo »
Ukusukela ekusekweni kwayo ngo-2007, i-China (i-Dongguan) imiboniso bhanyabhanya ephezulu yokusebenza kwefilimu kunye netheyiphu encamathelayo, ifilimu ekhuselayo kunye nomboniso wefilimu optical (CAPE) iye yaba sisikhokelo sentengiso kunye ne-vane yefilimu yokusebenza okuphezulu, ukusika ukufa, iteyiphu encamathelayo, ekhuselayo. ifayile...Funda ngokugqithisileyo »
Iidili eziluhlaza: i-4-pack Outdoor Solar izibane ze-LED $38 (Reg. $75), ngaphezulu
Ixesha lokuposa: Mar-05-2019
I-SolarTech-LED nge-Amazon inikezela ngepakethi emine yezibane ze-LED zangaphandle ze-Solar ze-37.99 ezithunyelwayo xa ikhowudi ye-promo i-VCTF2UDM isetyenziswa ngexesha lokuphuma. Njengothelekiso, ithengisa nge-75 yeedola okanye njalo. Eli lelona xabiso liphantsi esililandeleyo ngamaxesha onke phantse ngama-30 eedola. Yenza lula iseti yakho yokukhanyisa yangaphandle...Funda ngokugqithisileyo »